Muqdisho oo Degen iyo Roobab ka da'ay oo Saameen reebay – SBC
Muqdisho oo Degen iyo Roobab ka da'ay oo Saameen reebay
Xaalada guud ee Magaalada Muqdisho ayaa degen mana jiraan wax tacshiirad ah oo laga maqlayo deegaanada Maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen dhinacyada DKMG ah iyo Xarakada Alshabaab.
Inkastoo ay ishor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay islamarkaana markasta la filan karo dagaal Fool ka fool ah oo dhaca ayaa hadana waxaa jirta in aan jirin wax dareen dagaal ah oo maanta halkaasi ka jiray, taas oo loo sababeeyay dhibicda roobka oo xalay ilaa Gelinkii hore ee Maanta ka da’eysay Magaalada Muqdisho.
“Xiligan lagu jiro magaalada Muqdisho waxa ay tahay Mid uu Cirkeedu wada daruur yahay aana jirin wax qorax ah, taasna waa mida aan isleenahay hakad ayay gelisay Tacshiiradii badneyd ee la isweydaarsanayay” waxaa sidaasi yiri mid ka mid ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho.
Dhanka kale Dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa khasaare xoogleh uu soo gaarsiiyay roobkii Mahiigaanka ahaa ee Muqdisho ka da’ayay Xalay Ilaa Barqo Nimadii saaka .
Qaarkood dadkaasi oo aynu la hadalnay ayaa sheegay in Guryihii yaraa ee Cooshadaha ka sameystaan ee ay ku hoos jireen uu la tagay Roobka da’ay iminkana ay banaan cidla fadhiyaan.
Aabe ka mid ah dadkaasi ayaa ka codsaday Hay’adaha Samafalka, Ganacsatada iyo cid alaala Cidii wax la soo gaarikarta ay la soo gaaraan, xaaladooduna ay Meel halis ah Mareyso.
Sikastaba ha ahaatee Wadooyinka waaweyn ee Muqdisho ayaad ku arki kartaa Biyaha uu dhigay Roobkaasi oo waadiyo ka sameystayl, iyadoona aan jirin meel laga maro wadooyinkaasina ay yihiin kuwo Bur bur xoogan uu ka muuqdo maadama aaney helin mudo ka badan 2sano Dayactir.